Ukuvimbela ukungena kwamanzi endlini kungase kudingeke uma kwenzeka izindlu zihlala esifundeni esibhekene nomswakama ophakeme noma ukuchithwa kwemvula enkulu emnyakeni . Ithonya elibalulekile esimweni sesisekelo nezitezi ezakhiweni zingaba nenani lendawo emanzini angaphansi komhlaba. Ngakho-ke, ukungena kwamanzi phansi (ngaphandle kokucabangela umsebenzi ovunyelwe ukugxila emanzini angaphansi nesisekelo) kuyisidingo esizovimbela ukubola kwezinto ezivela enkuni nokuvikela isisekelo sekhonsathi yendlu.
Ukuze usebenze izinga eliphezulu nokuvimbela ukuthungwa komswakama ngokweqile, kuyadingeka ukusebenzisa izindlela zanamuhla, ezinokukhubazeka kanye nezinzuzo zabo siqu.
Ukuvinjwa kwamanzi okuhamba phansi kuyahluka ngokuya ngendlela yokubeka izinto ezivimbayo, kungaba okleychnoy, umjovo, ukusika, ukugcoba nezinye izinhlobo. Ekusebenzeni kwemisebenzi sebenzisa insimbi, i-asphalt, iplastiki, amaminerali nezinye izinto. Izinyathelo zokuqinisekisa ukungena kwamanzi zihloswe ukuvimbela ingress yamanzi angaphansi komhlaba noma ukuvikelwa ekubunjweni kokushisa kwezinto ezivela phansi.
Izindwangu ezinokwethenjelwa kakhulu nezinga eliphezulu zenza ukungena kwamanzi phansi. Ngendlela yokufakwa kwayo, kusetshenziswe isakhiwo esikhethekile se-polymeric, okufanele sisetshenziswe kwifomu. Ngemuva kokuba lukhuni, kusetshenziselwa ukugqoka okungenamanzi, okuhlala njalo. Ukuze kusetshenziswe ukuvinjelwa kwamanzi okugcoba, u-foam kanye nezinto zokwakha izinto ezinama-epoxy nazo ziyasetshenziswa.
Kuyafana nendlela yokuqala yokuqala indlela yokubuyisela emuva. Enkonzweni yomsebenzi njengento evulekile esetshenziselwa ukwakheka okuxekethile, okugcwalisa izikhala ezihambisanayo.
Ukuvalwa kwamanzi kwamapulangwe ekhonkolo, kanye nezitezi zokhuni, kungenziwa ngokudweba nge-varnish, ene-bitumen noma i-polymer base. Izindlela ezinjalo zilula futhi zingabizi. Kodwa-ke, banezinselelo eziningi, futhi uma bebhekene namazinga aphansi okushisa, ukugqoka kuqala ukudiliza, ukuqhuma kuvele kuyo, ekuqaleni kokuncane futhi ngokuhamba kwesikhathi. Le ngxenye kancane kancane ilahlekelwa izakhiwo zayo, ukuqina, ukuguquguquka nezinye izici. Leli phasi lokuvimbela amanzi lingasetshenziswa iminyaka engaphezu kwemihlanu.
Ukuze kwenziwe ilungiselelo lokugqoka, indlela yokuvikelwa yokufaka umfutho isetshenziswa futhi. Ukuze wenze lokhu, ukwakheka okuvikelayo kusetshenziselwa phezulu, ukukwazi ukukwazi ukungenelela emigqeni yesakhiwo, ngaleyo ndlela uvikele phansi emanzini. Indlela ye-Oaklaychny ihilela ukwelashwa kwendawo ngokusebenzisa ishidi noma izinto zokugada. Ukuqhafaza kwenziwa ngendwangu ebusweni obunconywe ngaphambilini, ngokushisa okushisayo.
Inokwethenjelwa kakhulu yindlela yokwehlisela ukuvikela phansi kusuka umswakama. Ngalendlela, isitezi esingaphansi singasetshenziswa amanzi. Enkonzweni yokusebenza, ukwakheka kwesimiso kusetshenziselwa noma yikuphi okumele kulungiswe kusengaphambili. Kulesi simo, ukuze uthuthukise ukwakheka, ungafaka izigcawu ezikhethekile ezivela kuma-polymers. Le ndlela ivumela ukusetshenziswa kwesikhashana ngamathayili e-ceramic.
Umsebenzi wokufaka ukungena kwamanzi ungancika ngohlobo nohlobo lwephansi, izimo zokusebenza. Noma kunjalo, akukho okumele kukuvimbele ekwenzeni ukuvikelwa ngokucophelela, ngokuthembekile nangendlela efanele. Njengoba ikhwalithi yokuvimbela ukungena kwamanzi kuyoxhomeka esikhathini esizayo kanye nomunye umsebenzi endlini, okungavimbela ukwakhiwa kokugqwala noma ukuthuthwa kwamanzi angaphansi komhlaba egumbini. Ngaphezu kwalokho, ukubaluleka kufanele kunikelwe ekukhetheni kwezinsiza kanye nezindlela, kanye nokufaneleka kokulungiswa kwangaphambili kwezizinda.
I-Arbolitic ivimbela: impendulo kanye nesipiliyoni sokwakhiwa
Kungani amathumba esiswini sakho?
Imilutha Yezithombe "Tricolor TV"? Qinisekisa idatha Kulula kakhulu!
Arbolit izandla zami siqu. Ukwakhiwa kwezindlu kusukela arbolita
Indlu lokubhalela, ubuciko zokuhlobisa indlu yamapulangwe
Izinhlelo Umlayezo osheshayo. Kanjani ukuze ushintshe iphasiwedi yakho ku-Agent
The best izikhungo zomphakathi eYekaterinburg